चर्चित नायक अनमोल केसीविरुद्ध महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंमा उजुरी - News20 Media
चर्चित नायक अनमोल केसीविरुद्ध महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंमा उजुरी
February 28, 2020 N20LeaveaComment on चर्चित नायक अनमोल केसीविरुद्ध महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंमा उजुरी
काठमाडौं । चर्चित नायक अनमोल केसीविरुद्ध प्रहरीमा उजुरी परेको छ । महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंमा उनीविरुद्ध ठगी गरेको अभियोगमा उजुरी परेको हो । फिलिम्स नेपाल, जयन श्रेष्ठ इन्टरटेटमेन्ट प्रालिबाट निर्माण हुन लागेको फिल्म धूपौरेमा खेल्न सहमति गरी ५ लाख एडभान्स समेत लिएपनि उनले नखेलेर ठगी गरेको भन्दै प्रहरीमा उजुरी परेको हो । फिल्मका निर्माता जयन श्रेष्ठ र रुपेश खड्कीले केसीविरुद्ध जाहेरी दिएको महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका डीएसपी होविन्द्र बोगटीले पुष्टि गरे ।
अभिनेता भुवन केसीका छोरा समेत रहेका केसीसँग श्रेष्ठ र खड्गीले गत असोज ३ गते ४० लाख पारिश्रमिक दिनेगरी सम्झौता गरेका थिए । यस्तै सम्झौताअनुसार ५ लाख अग्रिम भुक्तानी गरेपनि सम्झौताअनुसार केसीले फिल्म नखेलेर ठगी गरेको उजुरीमा उल्लेख छ । यस्तै फिल्म खेल्नका लागि ३ महिनासम्म जिम तथा एक्टिङ क्लासका लागि भन्दै अनमोलले आफूहरुको थप २ लाख ५० हजारसमेत सकेको उजुरीमा उल्लेख छ । यस्तै उनले फिल्मका लागि तय भएका अन्य कलाकार तथा टेक्नेसियनलाई समेत अग्रिम रकम ३० लाख दिन लगाइ उनी भने सम्पर्कमा नआएर आफूहरुलाई आर्थिक रुपमा क्षति पुर्याएको उजुरीमा उल्लेख छ ।
उजुरीमा केसीले हानी नोक्सानी पुर्याइ क्षति बिगो तथा कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति समेत दिलाइदिन माग गरिएको छ । होस्टेल फिल्मबाट अभिनयमा डेब्यु गरेका अनमोल पछिल्लो समयका महँगो हिरो हुन् । यस विषयमा प्रतिक्रिया लिन अनमोललाई पटक पटक सम्पर्क गर्दा उनी सम्पर्कमा आएनन् ।
मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई पति दा’बी गर्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मु’द्दा द’र्ता
१० कारणले गर्दा महिलाहरु परपुरुषसँग स’म्बन्ध राख्छन् !
गायिका आस्था राउत आफै प्रहरीसमक्ष उपस्थित भइन्
January 27, 2020 January 27, 2020 N20
सुशान्तको नि’धनले मनिषा कोइराला स्तब्ध !
June 15, 2020 June 15, 2020 N20
रहेनन् एम एस धोनीका सुशान्त सिंह राजपुतले गरे आ’त्मह’त्या
June 14, 2020 June 14, 2020 N20
पशुपतिनाथ मन्दिर पुस १ गतेदेखि खुल्ने आज क्षमा पूजा
भारतसँगकाे तेस्राे टी–२० क्रिकेटमा अस्ट्रेलिया १२ रनले विजयी
रोनाल्डोले गरे दुई गोल, युभेन्ट्सको शानदार जित
ओलीलाई भेट्न बालुवाटार पुगे प्रचण्ड
एटलान्टा र मिलानले अंक बाँडे